Macalinka Jarmalka Oo Tababar Adag & Dardaaran Siiyay Cayaartooydiisa Kahor Kulanka Portugal – Garsoore Sports
Macalinka Jarmalka Oo…
Macalinka Jarmalka Oo Tababar Adag & Dardaaran Siiyay Cayaartooydiisa Kahor Kulanka Portugal
Tababaraha xulka kubbada-cagta Jarmalka Joachim Low ayaa si dhab ah tababar u siiyay cayaartooydiisa maadaama ay qatar ugu jiraan inay goor hore ka baxaan tartanka Qaramada Yurub 2020 kahor kulanka Portugal ee maanta.
Jarmalka ayaa wajihi doona Cristiano Ronaldo xulkiisa Portugal Euro 2020 fiidnimada Sabtida, guuldarro kale ayaa ka dhigeysa inay qarka u saarnaadaan in laga takhaluso kaddib guuldarradii furitaanka tartanka ee Faransiiska kasoo gaaray.
Jarmalka ayaa Koobkii Adduunka ee 2018 ku haray heerka guruubyada, macalin Low wuxuu tababarkii ugu dambeeyay ee xulka maareeyay inuu farriintiisa gudbiyo kahor kulankooda Allianz Arena ee Munich.
Tababare Joachim Low ayaa kalsooni ku qaba in kooxdiisu ay wax walba rogi karto kahor inta aysan la kulmin Hungary kulanka ugu dambeeya ee group-ka, isagoo yiri: “Cadaadiska marwalba waa isku mid, dhib malahan cidda aan la ciyaareyno, waana xamili karnaa.”
“Waa inaan si fiican wax u qabanaa, maanaan sameeynin bandhig nagu filan kulankii Faransiiska waana taas waxa aan ka shaqeyneynay maalmihii ugu dambeeyay.”
Low ayaa la filayaa inuu wax ka beddelo shaxdiisa iyadoo weeraryahan Timo Werner uu beddelayi saaxiibkiis Chelsea Kai Havertz, kaasoo habeen xasilloon ku qaatay Faransiiska.
Leon Goretzka, oo ka soo laabanaya dhaawac, ayay u badan tahay inuu keydka kasoo kici doono si uu u xoojiyo qadka dhexe kaddib Low ayaa xaqiijiyay in xiddiga Bayern Munich uusan kusoo bilaaban doonin kulanka.
Marka laga hadlayo Portugal, Low wuxuu rajaynayaa “inay fishaan xul awood badan oo ay ula tartamaan sida Faransiiska oo kale” wuxuuna ka digay “ma aha inaan iska maahsanaano, xitaa ilbiriqsi.”
Joshua Kimmich, oo lagu wado inuu ka billowdo dambeedka-middig, ayaa sheegay inay ku xiran tahay Jarmalka inay helaan oo ka faa’iideystaan daciifnimada Portugal.
“Waxaan dooneynaa inaan si gaar ah diiradda u saarno awoodaheena,” ayuu yiri Kimmich. Kulankii Faransiiska, waxaan galnay goobo aan dooneynay inaan qabsano, laakiin ma aanan dhameystirin fursadihii aan helnay.
“Waxaan dooneynaa inaan sifiican uga hor tagno Portugal, koox walba waxay leedahay daciifnimo waxaana dooneynaa inaan soo bandhigno taas”.
Lazio Oo Wadahadallo Kula Jirta Torreira